xikmadaan iyo sida ay ku baxday – Biyacade
Xikmad dhab ka hadala iyo siday ku timid:
” Dhib soo socda nin dhag xeeyay iyo nin u dhoola cadeeyay, midna ma dhaafyo”.
Hada ka hor ayaa, laba wiil oo soomaaliya oo
dhex jiifa qol laba irdood leh, waxey habeen
saq dhexe ku kaceen tuugo soo jebineysa
labadi wiil midkood, tuugadi ayuu
ladagaalamay, si aysan gudaha usoo gelin,
midkii kale tuugadi ayuu lahadlay, wuxuu yiri:
“Ani idinla dagaalami maayo, ee markaad soo
gashiin hey dilina!”
Tuugadi markay hubsadeen inuu hal nin
dagaalamayo, ayay dagaal laba dhica ku
fureen, Albaabki gadaalo ayey qeybu aaday!,
miskiinki marba dhinac ayuu dhala utuuraa,
ninki kalena wuu iska fadhiyaa, aakhirki
tuugadi way soo galeen, ninkii
dagaalamayayna wuu baxsaday.
Ninkii nabad gelyada sugayay ayaa meeshi
loogu yimid, ninkii dagaalamay dadkii uu
daqray, iyo wax kastoo tuugadi rabeen, waxay
ka jukeesteen xariifki nabada sugayay.
Ninkii lagaraacay ayaa subaxdii dambe
” Dhib soo socda nin dhag xeeyay iyo nin u
dhoola cadeeyay midna ma dhaafyo!”
Cali Mahdi Jilacoow
Previous CASHARKA 4 dhalashadii rasuulkeyna muxamad NNKH
Next Shabaabku Shartoodii Nagala shaafiyaye Yaa noo sheekh ah